Agaasimihii madaxtooyada Boosaaso ee Puntland oo koox hubaysan ku dileen Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandAgaasimihii madaxtooyada Boosaaso ee Puntland oo koox hubaysan ku dileen Boosaaso
December 20, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Agaasimihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadn Gaas Huruuse. [Xuquuqda Sawirka: Horseed Media]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Agaasimihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadan Gaas Huruuse ayaa caawa oo Talaado ah koox hubaysan oo aan haybtooda la aqoon ku dileen magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen goobjoogayaashu.
Nimanka dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta, sida ay xaqiijiyeen dadka goobjoogayaasha ah.
Ma jirto cid si deg deg ah u sheegatay masuuliyada dilkaas, si kastoo ay ahaataba maleeshiyada Al-Shabaab ayaa badanaa geysata weeraradaan oo kale kaasoo lagu bartilmaameedsado saraakiisha dowladda Puntland ee ku sugan Boosaaso.
Dilkan ayaa imaanaya wax ka yar hal asbuuc, kadib markii taliye ku xigeenkii booliiska Puntland lagu dilay weerar ka dhacay Boosaaso, oo ay masuuliyadiisa sheegatay kooxda hubaysan ee Al-Shabaab.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa Xuseen Shiikh Maxamuud u magacaabay agaasimaha cusub ee madaxtooyadda, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyadda maanta oo Isniin ah. Waxay noqon magacaabistii [...]